Maxaad ka og tahay Wasaarada Maaliyada JSL oo u noqotay irmaan Samsam Cabdi Aadan, walaaleed iyo qoyska madaxtooyada - Sidee ayey u maalaan? Subject: Qaybtii 4aadanaad
Waa qoromo xaqiiqada iyo waxa bulshada Somaliland ka dahsoon badi ku qotonta, waa qormo aan ku koobnayn wasiirada aan maqaalkan ku iftiiminayno, hase ahaatee waxay horudhac u tahay qormoyoon aan toshka ku shidayno hanti-boobka xoogan ee aan lala gaban ee ay ku kacaan xubno badan oo madaxda sare ee xukumada Axmed Siilaanyo ka mid ah.
Qormadan qaybtii 4aad waxa aan diirada ku saaraynaya musuq maasuqa dulhoganaaya Wasaarada Maaliyada, Samsam Cabdi Aaden oo kalsoonida ay ku abto Madaxtooyada JSL awgeed ku dhaqanta hab cusub oo ay higaliyeen masuuliyiinta iyo madaxtooyada xukumada Siilaanyo oo aynu ugu magac darnay 'Cun anana waan cunaynaa yaanayse ciidi ina ogaan. Waa hab cusub oo si aan u qarsoonayn, sina bulshadu uga baraad laadahay hantida uamda oo aan ku koobnayn lacag, balse leh dhul iy hanti kale oo maguuraan ah.
Wasaarada Maaliyada oo ah qasnada qaranka saboolka ah ee Somaliland lee yahay ay ku soo dhacdo cashuurta umada sida hagar la'aanta ah u bixiya si dalkoodu wax u noqdo iyo meesha ay ku soo dhacdo qadarada lacagta ah ee Somaliland lagu caawiyo, ayaa u noqday irmaan ay Samsam Cabdi Aadan u maasho nafteeda, qoyska madaxtoyada iyo xubno wasiiro ah oo waxa jeebka looga lisay ay oogadooda maanta ay ka muuqato.
Wasiir Samsam oo aan lahayn aqoon tii wasaarada balse door bidaysa ulisida nafteeda iyo qoyska madaxtooyada oo ah kuwo nooceedu aanu Somaliland soo marin, marka aad eegto boobka hantida umadda ee badheedhka ah. ayaa sidoo kale Samsam waxa ay si xirfadaysan shilimada ay qaranka ka weecsato ku qarsata walaal keed Maxamuud Cabdi Aaaden oo ku magac dheer Xaaji, oo ah khabiir bulshada ka dahsoon oo qoyska Madaxtooyada iyo Samsam u qaabilsan wax-kala farsamaynta.
Hase ahaatee Wasiirka Maaliyada Samsam Cabdi Aden oo ay saaxiibo dhaw yihiin Marwada Madaxweynaha Somaliland Marwo Amina Maxamed Jirde , ayaa marwalba kalsooni buuxda kahaysata aqalka looga taliyo ee madaxtooyada JSL, sidaa awgeed ayaa waxay Wasiir Samsam ka duushaa in aanay haba yaraatee dib uga joogsan hantida umada ee ay musuqmaasuqayso,iyadoo siday doonto ka yeesha kayeesha, taasi oo keentay lungiga xoolaha khasnada Qaranka JLS ku jirilahaa, laguna qaban lahaa wax anfac u leh dalka iyo dadkaba.
Maxaa u daliil ah ficilkan 'Hanti-lunsi ee ay ku mobeen qoyska madaxtooyada iyo kalkaaliyahooda Samsam Cabdi Aadan?
Waxaanu usoo qaadan karnaa, Dhawaan waxay ay Wasiir Samsam lunsatay dhul kuyaala shacabka Magaalada Hargeysa, gaarahaan goobta kadanbaysa Deero Mall xagiisa danbe dhulka udhaxaysa sarta Cumar Cali Ducaale Centre iyo Deero Mall. Halkaas oo ay kaqaatay dhul badan oo ay ku qortay walaal keed Maxamuud Cabdi Aaden (Xaaji) lagana iibsaday ay khasnada qaranku leeyahay, lana doonaayo in ay dhawaan dhisaan balse kabaqanayso in ay Dadwaynuhu kutoosaan, sida awgeed ayaa waxaa ay Wasiirada Maaliyadu nin markii horeba si sharci daro ah u qabsada ydhulkii Hindian Line-ka , ninkaas oo lacagtii iibka laga siiyey qasnada Qaeanaka JSL lacag dhan 75 kun oo calaa balodh loo xisaabiyey 25 kun, ninkan oo ogaa in aanu markii horeba lahayn dhulka, ahaana danyar meesha degtay Hargeysadan dambe.
Musuq maamusuqa ay Samsam iyo walaal keed Xaaji ku hayaan Wasaarada Maaliyada kuma koobna oo qudha intan balse waxay Hadhwanaagnews ku haysaa baadhis xoogleh taasi oo soo hurgufi doonta meelkasta oo ay shilimaad mususq maasug lagashay Wasiirka Maaliyadu.
Waxaa Wasiirada Maaliyadu ay dhawaan ay lacag badan oo qasnada qaranka laga saaray lagu wareejiyay Maxamuud cabdi Aadan lacag taasi oo lagu iibsaday Beer ay ka iibsadeen duleedka magaalada Hargeysa, waa Meesha looyaqaan Geedeebleh. Beertan oo ah mid aad u wayn qiyaasteeduna tahay 2KM oo isku wareeg ah, waxa ay wasiir Samsam kadhistay guri aad u weyn oo hada la dhameystiray, taasi oo ay maalin kasta oo Khamiis ah, galinkeeda danbe kabaxdo Wasiirsad Samsam kuna soo qaadato nasasho ilaa maalinta Sabtida oo ay halkaas kas soo shaqo tagto. Waxay beertani doonaysaa iyadoo adeegsanaysa walaalkeed in lagu bixiyo xoolaha Wsaarada Maaliyada laguna waxna lagu beero oo laga dhigo beer bustaaneed ay wakhtiyada ay xilka kadagto doonayso in ay u noqoto meel lagu raaxaysto lagana manaafacaadsado qaab dhaqaale ahaaneed. Waxaa beertan ay galisay lacag kudhow sida ilo aad loogu kalsoon yahay Hadhwanaagnews u xaqiijiyeen lacag dhan $480,000 oo Dollarka Maraynaka ka ah.
Wasiir Samsam iyo walaadkeed Maxamuud Cabdi Aaden (Xaaji) oo ah qofka ay lacagta kuqarsato, ayaa waxa uu mudo aan sidaa u dhawayn ku dhawaaqay lacag ururin loos ameenayey Garoonka Xasan Xoog Basketball oo si taburuc ah loo dhisayo, waxaanu sheegau inuu ku tabaruucay lacag shan kun oo Doolar, ( $5000) waxase isla lacagtaas aroornimadii laga soo saaray Wasaarada Maaliyada, halka dadku moodayeen lacag uu bixinayey isagu, hase ahaatee waa astaan yar oo muujinaysa sida ay Samsam uga dhigatay qasnada qaranka jeeb ay leedahay o ay siday doonto iyo goortay doonto u galiso.
Sida ay Shabakada Hadhwanaagnews.com u xaqijiyeen dad yaqaan marwada madaxwaynaha Marwo Aamina Waris ayaa sheeg in ceebta iyo taariikh raacaysa qoyska madaxtooyada ay moodayaan in ay tahay mid Samsam Cabdi Aadan oo ay wadaagaan hanti-boobka ay raacayso Samsam oo kali ah, hase ahaatee waxa muuqata in inta ay qaadato Samsam ay ka weyn tahay inta qoyska Madaxweyne Siilaanyo, oo ay ugu horeeyaan wiilka uu sodoga u yahay ee Baashe Moorgan iyo Aamina Waris.
11 Sept 2015 ayaa wasiir Samam Cabdi Aaden amar kusiisay in walaalkeed xaaji lasiiyo gawaadhida Gudida Doorashooyinka loo soo iibinayey, taasi oo keentay in ay Wasiirka Maaliyadu, waa Samsam Abdi Aaden ay toos u siisay Walaalkeed Xaaji dhamaan lacagtii lagu soo iibiyay gawaadhidaas hada ushaqaysa Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Xaaji oo caadaystay in uu walaashii ka dhaadhiciyo gawaadhin in ay yihiin kuwa qaaliya, duldhigtana calaa gaadhigii inkabadan $30,000.
Hadhwnaagnews Waxaanu dabagal kusamaynay qiimaha gawaadhidaas laga soo siiyo Dubia, gawaadhin oo midkiiba yahay inta u dhaxaysay 45 kun oo doolarka Maraykan ka ah. Hadaba sida ay hadhwanaag heshay ayaa Maxamuud Cabdi Aaden waxa uu calaa gaadhigii dulsaartaa qiimaha uu joogo mid lamid ah, taas oo ay Wasiir SamSam Cabdi Adaam ay marwalba Waxii uu walaalkeed keeno aanay ka keenin wax xisaab ah, iyadoo mu aadininta reer Somaliland ee hore u keeni jirtay lagu xidhay geed loona diiday in ay haba yaratee wax saamayn ah kuyeeshan, qandaraasyada qaranka kubixinaayo iibka gawaadhidan.
Waxaan tusaale usoo qaadanaynaa gaadhi kujira guriga Wasiir Samsam CAbdi Aaden oo Landcruesil ka CAdaanka the latest modelka , oo laga musuq maasuqay gawaadhidhii loo keenay Komishanka Qaranka ayaa waxaa si badheedh ah oon kagabasho lahayn ladoonaayay in laga iibiyo Ninka kumaga caaban Sheekh Saleebaan Siciid Cali oo ahaa maareeyihii Haamaha Shidaalka Berbera kaas oo markii hore Maxuumud Cabdi Aaden kaqaaday guno yar oo ah inuu gaadhi ukeeni doono lacagta kuhadhsana uu bixiyo marka gaadhi uu xaaji keeno.
Waxse Xaaji kaqaaday gaadhii MR saleebaan markii uu bixin waayay lacagta qaybtii kahadhsanayd, gaadhigaas oo hada ku xaraysan guriga Wasiir Samsam Cabdi Aaden, balse sifo khaldan iyo musuq maasug kuqaadatay gaadhigan iyadoo kadhigaysa wax uuleeyahay mulkiile Xaaji balse yahay xoole Dawladeed oo lamusuq maasuqay. Waxaana Hada loodon doonayaa Gaadhigan waa Iib. Moodalka gaadhigaas waakan hoos kusawiran. Goobtan aad arkaysaan waa goobta laga soo iibiyo gawaadhidaas oo kutaal magaalada dubia .
29 septem 2015 waxay Samsam doonaysay in walaakeed ay siiso 7 milyan project ahaa oo ladoonaayay in lagucuno wax loogu yeedhay Public Financial Management System. Kaasi oo ay Wasiir SamSam Cabdi Aaden doonaysay in ay siiso oo ay u hirgaliso walaal keed Xaaji, Walaalkeed Maxamuud Cabdi Aaden oo ah gaboodka ay Wasiir Samsam kuqarsato lacagta laga musuq maasuqay Wasaarada Maaliyada Somiland.
Hase ahaatee waxaa arrinkan u cuntoobiwaayay Madaxweyne Siilanyo ganafka ku dhuftey Qorshe Wasiiradiisa Maaliyadu, SamSam Cabdi Aadan ku soo bandhigtey shirkii Golaha Wasiirada ee ay doonaysay in ay ufaruur xidho Arrinkan Iyada Waa wasiir samsam iyo walaal Keed xaaji, si ay ulun sadaan lacag malaayiin doolar ah lagana lunsanaayo khasnada dawlada khasnada qaranka JSL . Qorshaha Wasiirada Maaliyadu shirka Golaha Wassirada keentey ayaa ahaa, sida ay Hadhwanaagnews kuxeshay xogtaas oo ahayd qandaraas lagu tayeynayo Wasaarada Maaliyada oo lagu magacaabo «Public Financial Management System», aaney ku baxeyso lacag ku dhaw 7 Milyan oo Doolar. Hase ahaatee Wasiirka hore ee Madaxtooyada, Xirsi Xaaji Cali ayaa Madawxeyne Siilanyo kula taliyey in aan hada laqaadan mashruucan maadaama ay hada socoto wareejinta Haamaha SHilaadku.
Lasoco qaybta 5aad oo soo ban dhigi doonta musuqa ragaadiyay Wasaarada Maaliyada. Iyo Maxamuud Cabdi Aaden oo ah shaqsi keena shidaalka dalka laguna heshiiyay cun Ana aan cunee cidi yaanayse ina ogaan . Lacaso Qaybta danbe oo taaban doonta shaqsiyaad aad ubadan oo dumar iyo ragba leh oo dhaqaalaha dalka lagu naasnuujiyo, kuwaas oo qaarkood dhul banaan oo ka soo horjeeda xaruntii wasaarada Arimaha Guduaha ee hore ama Xaruntii Gobolka ee hore, taas oo jeebka qaranka lagaga lunsaday $280,000 o dhulkaa la siistay.
Afeef: Hadhwanaagnews si gaar ah uma xulan Samsam Cabdi Aadan iyo walaalkeed, hase ahaatee baadhitaanka lunsiga hantida umada ayaa soo galay, waxaana jira masuuliyiin kale oo aanu soo bandhigayno hantidii ay lahaayeen ka hor intii aan xilal loo magacaabin iyo inta ay jeebka qaranka ka samaysteen. Hadhwanaagnews kuma shaqayso nidaam qof masuula lo beegsado beesha uu yahay iwm, hase ahaatee danta qaran awgeed waxa naga go'an in masuuliyiinta boobka ku foogan tooshka lagu iftiimoyo.
Wixii qoraalo ee aad kaga rayi-celinaysaan iyo hadba wixi la xidhiidha boobka hanti ummada Somaliland fadlan ku soo hagaaji contact@hadhwanaagnews,com
Kooxda -dabagalka hanti-boobka
Lasoco Qeybaha kale iyo Sawiro Cusub.......